Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Wafdi Balaaran oo u duuley Dalka Ingiriiska | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Wafdi Balaaran oo u duuley Dalka Ingiriiska
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha dowlada Federaalka Somalia oo ay ka mid ahaayeen wasiiro , xildhibaano, ganacsato iyio qeybaha kale ee bulshada ayaa u duuley dalka Ingiriiska oo ay kaga qeybgali doonaan shirka Somalida ee London oo bishaan 7deeda lagu wado inuu halkaasi ka furmo.
Shirkani ayaa waxaa lagu wadaa inay ka soo qeybgalaan Madaxweynayaal , Ra’iisul wasaarayaal, Wasiiru arrimo dibadeedyo, wakiilo kala matala dowlado,ururada caalamiga, kuwa gobolka , kuwa gargaarka , bankiyo,shirkado , maal-geliyeyaal shisheeye iyo kuwa kale .
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Shirka Soomaalida London ka jeedin doona sida dowladiisa ay taageero caalami ah u heli laheyd si looga baxo dhibaatada dabada dheeraatey oo in ka badan 22 sano dalka ku jirey.
Shirkaan ayaa ku soo aadaaya iyadoo khilaaf weyn uu soo kala dhexgaley gudaha dowlada Federaalka kuwaasoo madaxweynaha ku eedeeyey inuusan tixgelin nidaamka iyo sharuucda dalka u taala, sidoo kalena waxaa qaadacey maamulada Puntland iyo weliba Somaliland iney ka mid noqdaan wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Turkiga oo shirkaan lagu casumey ayaa isna ka cudurdaartey ka qeybgalkiisa, balse waxaa la filaayaa in uu u diro wakiil joob jog ka ahaada kulanka bisha 7deeda furmi doono. lama garan karo waxa Turkiga oo hormuud ka ahaa arrimaha Somalia uu Ra’isul Wasaarahaooda uga cudurdaarey ka qeybgalka shirkaan.
Previous articleTaliyayaasha Nabad Sugida iyo Booliiska oo maanta la dhaarshey + Sawiro + Faalo
Next articleDhageyso: Hilowle Aadan “Ergada J/Hoose iyo J/Dhexe waa la soo xuley, khilaafku waxa uu ka jiraa Ergada Gobolka Gedo oo kaliya”